I-dumbbell sisiqwenga sezixhobo zemidlalo, kwimeko ezininzi, apho kukho ibhar yentsimbi kunye nobunzima obubini, obudityaniswe ngeziphelo ngohlobo lweebhola okanye iidiski. Ukuziqhelanisa nesixhobo soqeqesho esibizwa ngokuba luqeqesho lwe-dumbbell.
Iidumbbells ziza ngobukhulu obahlukeneyo, iiklasi ezinobunzima, kunye nemibala. Iimbumbulu ezikhanyayo zisetyenziswa ikakhulu kwijiminnastics nakuqeqesho lomzimba. Ngezizathu ezikhuthazayo, ezi zihlala zigcinwa zinemibala eqaqambileyo nebengezelayo. Iidumbbells ezinobunzima bentsimbi enzima zinokufumaneka kuqeqesho lobunzima kunye nokwakha umzimba.
Kodwa kunokuthetha ntoni ukuba sidibana ne-dumbbell ephupheni? Ngaba mhlawumbi yimemori nje kuba siqeqesha ngoku? Okanye ngaba sisinye isimemo sokuzilolonga ngakumbi?
1 Uphawu lwephupha «dumbbell» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «dumbbell» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «dumbbell» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «dumbbell» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhlalutyo lwamaphupha ngokubanzi litolika "iphupha" lomfanekiso wephupha kuthetha ukuba iphupha lingaphezulu Umsebenzi Uyacetyiswa ngokuvuka ebomini. Kuya kufuneka ube namandla ngakumbi ebomini bakho. Ngexesha elifanayo, nangona kunjalo, kuya kufuneka uqaphele kwaye ucinge ngononophelo okanye ucwangcise amanyathelo akho.
Ukuba wenza umthambo nge-dumbbells ephupheni, uziva ulungele umbandela othile, kodwa kusafuneka ulumke ngokungakhathali. Enye Ukujonga ngaphezulu ubuchule bukabani abunakuba yingenelo. Ukuba wenza i-dumbbell gymnastics ephupheni lakho, uya kufezekisa impumelelo yezemali ngezakhono zakho.
Ukuba umntu oleleyo uzilolonga nobunzima kwindawo yokuzivocavoca, kufanelekile Ukuzithemba Yomelela ngaphakathi el mundo zokwenza iwotshi ukuze ukwazi ukuyiqonda kakuhle le mingeni izayo. Ukuba umqeqeshi ukukhuthaza ukuba wenze uqeqesho lwe-dumbbell ngelixa ulele, oku kunokubonwa njengesimemo sokujongana nokungaziphathi okwethutyana ebomini bokuvuka. Unokufuna ukwenza utshintsho kwindlela ophila ngayo.
Uphawu lwephupha «dumbbell» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, inye okanye nangaphezulu ubunzima bunokufakwa ephupheni. amandla angaphakathi kunye nokuzeyisa kwamaphupha kubonisa, ukuba uye wakhula ngomzamo nomzamo.
Amandla Kuyimfuneko xa ukuphakamisa i-dumbbell kunokuqondwa njengomyalezo ovela kwi-unconscious. Umphuphi kufuneka athembele ngakumbi kubuchule bakhe nakweyona inkulu kwihlabathi lenene. Unyamezelo umboniso. Ukuba uqeqesha izihlunu zakho ngee-dumbbells ephupheni, oku kungabonisa ukuba ulungele umzamo omkhulu wokufezekisa injongo ethile. Nangona kunjalo, ukuba ugcwalisa amandla akho ephupheni, kuya kufuneka ulumke ungazicingeli kakhulu kwihlabathi eliphaphamayo.
Ukuzivocavoca umzimba nge-dumbbells ephupheni kubonisa, ngokutolikwa kwengqondo yephupha, ukuba umntu olalayo ulungele yena impilo kufuneka uyenze. Amandla akho obuntu aya kuba luncedo olukhulu kuwe. Nabani na ophupha ngokulwa nobunzima babo obugqithisileyo ngoqeqesho lwe-dumbbell uhlala efuna ukutshintsha indlela abaziva ngayo kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «dumbbell» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, uphawu lwephupha "idumbbell" ihlala iqulethe isicelo kulowo uphuphayo, wakhe amandla okomoya ungazonakalisi, kodwa zisebenzise ngokungathí sina nangesidima.